Kabaha Oxford: Goorma iyo Sidee Loo Xidhaa Dharkaan Casriga ah ee Britishka ah | Ragga Stylish
Sida xaqiiqada ah waad maqasheen Rabbiga kabaha oxford xitaa haddii aadan lahayn sawirka cad ee madaxaaga ama aadan ka duwanaan karin inta ka hartay moodooyinka dukaanka kabaha. Qeexitaan ahaan, kabaha Oxford waa nooc ka mid ah kabo cagaha xiran oo leh xargo gaara waxyar uun anqawga. Iyagaa lagu yaqaan jidkaas maxaa yeelay waxay jireen ilaa qarnigii XNUMXaad, markay caan ka noqdeen ardayda dhigata Jaamacadda Oxford. Qaabkeedu wuxuu isu soo rogayaa sida kabaha rasmiga ah ee marwooyinka oo wuxuu ahaa a isbeddel aan dhammaad lahayn oo sii socda in la xidho maanta.
Gudaha qaabka Oxford waxaa jira noocyo qaar oo leh isbeddelo yar faahfaahinta sida 'Brogue Full', oo ah kuwa godad ku leh maqaarka ama sawirro daloola oo ku yaal maaddada lafteeda. Isbaanishka waxaa si fiican loogu yaqaan feer, daloolin ama jarjar waxaana la sheegaa in howsha asalka ah ee godadani ay ahayd in la fududeeyo qallalkooda gudaha ee berrinka, xalkaas oo ay hirgeliyeen beeraleyda Irish. Xalkan loogu talagalay qoyaanku wuxuu ku leeyahay caankiisa weyn iyo wixii ka sarreeya, horumarkiisa.
Magaciisu wuxuu yimid 30-yadii gacanta Edward VII Prince of Wales, oo kor ugu qaaday kabaha kabaha ugana dhigay rasmi ahaan kabaha xiran munaasabad kasta; Muddo yar ka dib ganacsatadu waxay bilaabeen inay ku daydaan qaabkooda iyaga oo ku labista dharkooda maalinlaha ah markii dambena haweenku waxay u qaateen sidii qayb ka mid ah muuqaalkooda. Kaniisadaha, Dolce & Gabbana ama Salvatore Ferragamo waa qaar ka mid ah shirkadaha kabaha ee soo jeediyay in la horumariyo kabaha ugu fiican ee Oxford ee ragga.
Sida loo dhexgeliyo qaabkaaga
Kala duwanaanshaheeda ayaa fure u ahaa guusha tusaalaha Oxford, tan iyo way kufiican tahay shaqo maalinba maalinta ka dambeysa iyo inaad aroos aaddo habeenkii, illaa iyo inta aan u isticmaalno midabada saxda ah munaasabad kasta: bunni waa waxoogaa aan rasmi ahayn marka loo eego madow iyo qurxinta kabaha ayaa go'aaminaya inay ku habboon tahay munaasabad gaar ah ama in la aado xafiiska.
Si aad uhesho dharka isuduwidda, si fudud u dooro midabada aasaasiga ah qayb kasta. Oxfords maqaar bunni ah ayaa ah xulashada saxda ah marka lagu daro midab cawlan, bunni mugdi ah, ama midab badda leh. Halkii aad xirnaan laheyd madow, Oxford bunni ah ayaa indho qabad badan leh marka lagu daro midabadan waxayna kaa dhigi doontaa inaad muuqaal ahaan ka soo dhex muuqato.
Waad ku mahadsantahay waxqabadkeeda, qaabkani waa gabi ahaanba unisex iyada oo aan lumin xarrago. ka soo nooleenta brit kkega dayrtaani waa xoog badan yihiin waxayna bilaabayaan inay muujiyaan in Oxford uusan mar dambe aheyn kabo si fudud loogu xirto jaakado ama xiriiro. Waxa kale oo aad ku dari kartaa kaarbooni, surwaal ballaadhan ama xarig qaanso leh shaarkaaga si aad u gaarto muuqaal dandy xusuusinaysa soo jiidashadii 50-kii New York. Ma jiraan wax ka qurux badan intaas?
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Calzado » Kabaha Oxford: goorta iyo sida loo xirto muuqaalkan casriga ah ee Ingiriiska